Bitcoin Hardforks chii? - Blockchain News
The Bitcoin samambure aenda kuburikidza yakawanda maforogo kubva veMubatanidzwa cryptocurrency izvi 2008. nemaforogo izvi vaifanira kubatsira Developers kugadzirisa matambudziko akadai scalability, yakaderera inokwana TPS (mutengapwe pa wechipiri), shoma misa saizi, uye vose zvavo kuti zviite kuti Bitcoin Network zadzisa. With bitcoin ari pachena bhuku Software, chero mushandisi pamusoro pomumbure anogona kutevedzera, nadzurudza, kuzozivisa mitemo yavo pachavo pane bumbiro. saka, chero mushandisi anogona kuumba protocols itsva uye ngetani dziri kuonekwa nemaforogo, kureva nyoro kana hardforks pamusoro pomumbure.
Softfork chinhu reversible kuchinja blockchain dzakati kuti hachidzivisi nodes kwezviitiko itsva kubva vanokurukura nodes hwekare cheni. The yakanakisisa softfork muenzaniso pane rusaruro Chapupu kana SegWit. Network vanozvishandisa kunge kusashanda softfork izvi August kuti optimize sechivako chinogumbura kwema kuti aizogara zvishoma ndangariro nzvimbo. The softfork akabvumira kuti inoperera vabatisise mamwe mashoko pasina kuchinja basa Bitcoin samambure.
Hardfork chinhu chitsva cheni Network inopfurwa apo mitemo itsva vava zvaisaenderana yekare blockchain dzakati. In iyi, ari nodes zvitsva nezvitsaru network havana kukwanisa “taurira,” sezvo hardfork zvinoreva kuchinja tenderano mashandiro pachayo. Achibatsirwa hardforks, samambure vanoishandisa edza kugadzirisa matambudziko kiyi Bitcoin samambure akadai yakaderera rezvebonde bandwidth kuti anobvumira kuti ribude kusvika kwema nomwe pasekondi yoga yoga uye dzisina misa kukura kuti, maererano zhinji, unofanira kupfuura 1 MB pamusoro date. Hardforks zvakare kubvumira vanoshandisa kusika cryptocurrencies itsva, sezvo zvinotsiva bitcoin.
Past hardforks Mibairo
Bitcoin XT ndiye wokutanga Bitcoin Network hardfork, iyo yakaitwa August 2015. The hardfork, iyo inobva kupi regiune Bitcoin Core, aifanira kuwedzera chinogumbura kukura kusvika 8 MB, nokudaro vachiwedzera pomumbure bandwidth kusvika 24 kwema por wechipiri, asi cryptocurrency haana kuwana rutsigiro zvakakodzera kubva mugodhi munharaunda. To dzika Bitcoin XT zvaida 75% zvose Bitcoin samambure miners kupinda itsva rezvebonde, asi chete 12% vavo vakatsigira hardfork. Munhau iyi, mumwe mukuru Developers Mike Hearn vakatengesa cryptocurrencies ake uye akasiya chirongwa 2016. Semagumo, chete 20 nodes vakasiyiwa kubva yepakutanga 4,000 zvidzidzo, iyo akaita nemambure isina panguva iyoyo.
Bitcoin Unlimited hardfork kwakatangwa kuchinja chinogumbura kukura muna May 2016, kana miners vakanga aronga kusarudza ukuru ramangwana samambure chinhu chinogumbura. Maererano miners, kuwedzera kukura chinogumbura haangavi chete kubvisa tungamidzana asiwo kuvandudza profitability yavo nokuwedzera yose basa yechikoro ari misa. Asi hardforks vatsoropodzi, vazhinji vacho Developers, akacherechedza kuti nzira iyi aigona kuwedzera mukana kuti guru centralized madziva miners aizotanga havarongi nemambure kukura.
Izvi zvaireva kuti miners dzine Hardware nezvaanogona zvaisazova kusakwanisa zvinobudirira kukura mambure uye nokufamba kwenguva zvaizochengetwa kwaidarika zvachose. saka, nemambure aizova centralized mumadziva akawanda. Nyanzvi akawana notupukanana vanoverengeka Bitcoin Unlimited Software, iyo kutanga April uye muna May gore rino kwakaita kuti aurayiwe 70% of nodes vari samambure, nokudaro kukanganisa crypto munharaunda kuvimba kuti nemaforogo izvi.
Bitcoin Classic Chirongwa kwakatangwa kugadzirisa Bitcoin Network scalability matambudziko, achigere kugadziriswa pachishandiswa Bitcoin XT hardfork. Chinangwa chacho chaiva kuwedzera chinogumbura kukura kusvika 2 MB uye ipapo 4 MB. Asi hardfork ichi haana awane rutsigiro zvakakodzera pamusoro crypto vomunharaunda. Panguva chaizvo kutanga kupfuura 2,000 nodes vakatora mugove chirongwa,” asi nhamba akadonha kuna 100 kubudikidza 2017. In November pakaziviswa kuti basa rakanga kuvharira pasi pashure SegWit2X akanga akadzima uye Developers chirongwa vakanga vakatsigira Bitcoin Cash pachena, ari cryptocurrency itsva.
Bitcoin Cash zvimwe ndiyo akakurumbira uye akabudirira Bitcoin Network hardfork. Somugumisiro kumanikidzwa hardfork dzakati, Bitcoin Cash akaonekwa misa 478,558 pamusoro 1 Nyamavhuvhu. Sezvo chikamu forogo, kuti chinogumbura saizi yakawedzera kubva 1 MB kuti 8 MB, uye izvi, mukudzosa, makawedzera zvakarukwa vanokwanisa uye kuderedzwa mutengapwe yechikoro. After hardfork, Bitcoin yokuisira akanga zvakaenzana Bitcoin Cash zvavo e-wallets. The itsva rezvebonde akapa mashandiro inodzivirira kubva pamunhu yaizoshanda panguva kwema mu blockchains maviri. nhasi, 13 Zvita, ari Bitcoin Cash Gengi iri $1,616.84 uye pari wakaiswa rechitatu maererano cryptomarket capitalization.
Bitcoin Gold cryptocurrency akaonekwa pasi yechi24 October semubairo hardfork pamusoro misa 491,407 kuitwa mugodhi zvakasimba Mheni ASIC kuHong Kong. Chinangwa chacho ndechokuti kuva anokwezva mari nokuda vasiri nyanzvi miners kupfuura pakutanga bitcoin. Munhau iyi, mukuru nhamba samambure vanokwanisa kwangu Bitcoin Gold uye cryptocurrency Mashoko ari “kuti bitcoin decentralized zvakare.” Panzvimbo yekare Zvinoratidza-of-Work dzakati hardfork initiators vanoshandisa itsva, Equihash. algorithm Izvi unetseke kukura asingashumbi kuwana ndangariro (RAM) uye rinoshandiswawo kana kuchera cryptocurrency Zcash. nhasi, 13 Zvita, Bitcoin Gold Gengi iri $276.88 uye musika capitalization kunopfuura $4.5 bhiriyoni.
Bitcoin Diamond ndiye hardfork, izvo zvakaitika pakupera November pamusoro misa 495,866. Bitcoin Diamond miners pave inoperera itsva algorithm chehumbowo basa (PoW). wo, cryptocurrency ichi zvakasiyana wokutanga chaizvo mumwe gumi nguva kuwedzera Vhoriyamu choutsi uye misa kukura 8 MB. Developers vanodavira kuti hardfork izvi zvichiitirwa kugadzirisa matambudziko akadai kushaya voga kudzivirira, nonoka mutengapwe chisimbiso, uye yakakwirira chikumbaridzozve kuti vatori zvitsva kupinda samambure. Kusika Bitcoin Diamond mugodhi Network, e-chikwama, nodes bumbiro, uye API, uyewo kuwedzera rakavhurika bhuku remitemo musi GitHub ari aronga pakazopera gore.
Super Bitcoin, mumwe cryptocurrency itsva, akaonekwa 12 Zvita, sezvo mugumisiro weboka iri Bitcoin pomumbure pamusoro misa 498,888. The Super Bitcoin Mashoko ari “kuti Bitcoin mukuru zvakare.” Zvinokosha kucherechedza kuti pane chinyakare ICO papuratifomu ichi anoshandisa nzira itsva yokukwezva upfumi, akadana Initial Fork Zvipiriso (IFO). The hardfork zvinopa chikwata zvinowedzera kusvika 8 MB. Nemambure anoshandisa zvemichina Mheni Network kuti achabvumira kuitisa ane risingaperi uwandu micropayments. Uyezve, Super Bitcoin samambure Paanoramba ngwara zvibvumirano. Developers chitsamba, zvisinei, kuti forogo rinotarisirwa kuziva crypto munharaunda kuchiva uye zviri nani ane kuedza.
Mheni Bitcoin - nemambure weboka zvichaitika anofungidzirwa yechi23 December pamusoro misa 499,999. The Developers itsva rezvebonde kuda nokubatanidza zvakanakisisa unhu bitcoin uye ethereum. saka, mheni Network rwokugadzira zvicharehwawo kushandiswa itsva rezvebonde yokuita micropayments uye DPOS itsva (Zvinoratidza kupa wehoko) mashandiro richashandiswa nokuda tenderano. Kuwedzera chikwata kusvika 2 MB, izvo kuchawedzera kutengeserana nokukurumidza uye anotarisirwa kuti mambure achatsigira ngwara zvibvumirano. Nemambure vachavawo yakawedzerwa kumhanya itsva chinogumbura kokusikwa achatora kusvika 3 masekondi. Nepo hardfork haritsigiri SegWit, izvozvo anodzivirira kubva kudzokororwa kwema. zvisinei, zvinokosha kuziva kuti pasinei kuuya pakuparurwa musi, Chirongwa ane achiri kudzika kushanda Website.
Bitcoin hardfork Good, hwakaitwa neDare Chinese cryptocurrency investor Chandler Guo, zvichaitika nezuva misa 501,225, pamusoro 25 Zvita. The muzvinabhizimisi akati kuti pre-mugodhi haana kuitika, asi anobuda vhoriyamu kungaguma 21 miriyoni GOD. Several unganidza exchanges kare kwakaratidza kuti vachaita kushanda pamwe cryptocurrency itsva, izvo zvichashandiswa chipo kuti bitcoin dzibate ari reshiyo mumwe munhu.
Bitcoin Platinum chaipiwa somunhu Bitcoin Network hardfork, iyo aifanira kuitika pamusoro misa 498,577 nokusika munhu cryptocurrency idzva. zvisinei, sezvo Cointelegraph anoshuma, kuti hardfork iri vanonyengedza akasikwa wechiduku aibva South Korea, uye currency pachayo kopi izere Bitcoin Cash bumbiro.
Co-muvambi ZenCash, Rob Viglione anotenda kuti maforogo ndivo zvakakwana danho blockchain budiriro:
Open-kunobva zvinhu zvipenyu yakagadzirirwa ichishanduka, kana kuti kuburikidza mu-chirongwa kuvandudzwa kana zvenyama umo Mubumbiro racho rose muzasi Rinodzika imwe sawirirana mirayiridzo. Shanduka chinhu sviba muitiro, saka haugari zvakanaka, asi dzimwe nguva ndiyo chete nzira kuti Kubudirira makuru.
The vaitungamirira yokuvaka kuti blockchain muna Sweetbridge, Bob Summerville anotenda kuti nemaforogo zvakanaka nokuti vanobvumira nhengo kusarudza sei nemambure vanofanira kukudziridza:
Kwave nemakore kutya, kusava nechokwadi, uye chokwadi mukati Bitcoin nharaunda pamusoro Risk zvakaoma nemaforogo. Zviri pachena kwandiri kuti vakawanda kuti ruzha yave kuuya kubva mumapoka kuti nyasha timuteerere uye kusenza pamusoro vakasununguka mumisika uye kodzero secede.
Hakuna chinhu akadai 'nemisero zvakaipa.' Haufaniri rokumukurudzira chikwata chimwe kana mumwe. Kwacho uye makwikwi zvakanaka. Regai musika kusarudza uye kuitawo apo unoona kukosha.
zvinokosha kudzidza ruzivo rwangu kubva paEti / nezvimwewo paradzanisa yakanga kuti vashoma ngetani vari zvimwe. Kana crypto munharaunda ine vasingawirirani zvachose, zvino unogona kuenda kwako vakaparadzana nzira, uye kuti ndiyo chete yakanaka. Iwe kurambana uye vaviri kuenderera mberi hwenyu, pane kugara pamwe chete nenhamo nokusingaperi, nguva dzose vachingopopotedzana. "
Asi Director pamusoro LOOMIA, Sauro Lederer ane zvachose pakatarisana nemaonero:
"Rokunyorovesa musika pamwe shanduro dzakasiyana-siyana Bitcoin ndiyo kusanatsonzwisisika vanoshandisa uye discredits kutaura kuti pane vashoma BitCoins-sezvo unogona nguva dzose forogo nayo nerubatsiro kaviri,"Anodaro Lederer. "Chii chaizvo unotambudza ndechokuti izvi kuruka-offs dzichibuda kubva pashoma squabble muna Bitcoin munharaunda sei kubata chinogumbura saizi muganhu. Panzvimbo kuuya chibvumirano, nharaunda, Developers, uye bumbiro vari fracturing kupinda akasiyana. "
Previous Post:Blockchain News 11 Ndira 2018
Next Post:Blockchain News 12 Ndira 2018